Ciidamada Dowladda & kuwa Jubbaland oo howlgal wadajir ah fuliyay – Banaadir Times
Ciidamada Dowladda & kuwa Jubbaland oo howlgal wadajir ah fuliyay
By banaadir 16th January 2021 57 No comment
Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa jubbaland ayaa howlgallo ka dhan ah Al-Shabab waxa ay ka sameeyeen Deegaano Hoostaga Degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose.
Howlgalka oo lagu xaqiijinayay amniga deeganada hoostaga degmada jamaame ayaa waxaa Ciidamada ay sigaar ah uga sameeyeen degaannada, Koban, Bangiini iyo Araare, halkaas oo mararka qaar lagu arko Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Taliyaha ururka 56aa guutada 11aad qaybta 43aad ee xoogga dalka oo howlgalkaan markii uu soo gaba gaboobay lahadlay warbaahinta ayaa Waxa uu sheegay in 9 howlgal ay sameeyeen ayna kusoo qabteen xubno katirsan Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in howlgalka uu sii socon doono ilaa ay inta Ciidamada dowladda ay kala wareegayaan Al-Shabaab degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Booliska Somaliland oo xiray Afar Wariye
Sawirro: Wafdi ka socda Aqalka Sare oo ku wajahan Magaalada Kismaayo
Khasaaro hordhac ah oo laga helay qaraxa ka dhacay Muqdisho.